နေအိမ် / အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့် / အတ္တလန်တာခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးခုံသမာဓိသည်နယူးရေးစင်တာ
29/07/2015 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အဖြစ်ပထမဦးဆုံးဂလိုဘယ်အနုညာတစီရင် Review ကဖော်ပြခဲ့သည်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးခုံသမာဓိအသစ်တစ်ခုစင်တာအတ္တလန်တာအတွက်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မိုင်ယာမီနှင့် New York မှာလက်ရှိရှိပြီးသားသူတွေကိုအပြိုင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများများအတွက် AAA ရဲ့ ICDR နှင့်အတူ, ကြောပိတ်ဆို့မှု, နှင့်အခြား ခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြား.
အတ္တလန်တာဖြစ်ပါသည်, သီအိုရီ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိဘို့အကောင်းတစ်ရွေးချယ်မှု, 11 တိုက်နယ်ခုံသမာဓိ-friendly ဖြစ်တယ်ကတည်းက. တခြားနေရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မတူဘဲ, 11 တိုက်နယ်ကြောင်းကျင်းပရန်အခြားတပါးအမြိုးသားဥပဒေသိပ္ပံနှင့်အတူသူ့ဟာသူ aligns “ပညတ္တိကျမ်းများအတွက်ကျမှုကိုထငျရှားအရေးမစိုက်” တစ်ခုံသမာဓိဆုဖယ် setting များအတွက်မြေပြင်မဟုတ်ပါဘူး. ပညတ္တိကျမ်းများအတွက်ကျမှုကိုထငျရှားအရေးမစိုက်အချို့မှခုံသမာဓိဆုတွန်းလှန်များအတွက်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်စံနှုန်းအဖြစ်ရှုမြင်စေခြင်းငှါနေစဉ်, နိုင်ငံတကာခုံသမာဓိ၏သော့အားသာချက်ထဲကတစ်ခုထိခိုက်စေ, ကခုံသမာဓိဆုအမျိုးသားရေးတရားရုံးစနစ်များ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်ခွင့်ပြုကတည်းက, သောကြားနေရေးထိခိုက်စေ (အစစ်အမှန်သို့မဟုတ်ရိပ်မိ) ခုံသမာဓိနှင့်လည်းအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ကြာချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သကျတမျးကိုရှညျ.
အတ္တလန်တာလည်းလက်တွေ့ကျသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိများအတွက်နှစ်သက်ဖွယ်ထိုင်ခုံဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းခရီးစဉ်များအတွက်အဓိကအချက်အချာဖြစ်ပါသည်, များစွာသောကြီးမားသောနိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်း၏ဌာနချုပ်အိမ်ရှင်အဖြစ်, ထိုသို့ခုံသမာဓိကြားနာ၏သင်တန်းကျော် New York မှာထက်အတ္တလန်တာနေဒီထက်စျေးကြီးသည်.
အဆိုပါဂျော်ဂျီယာတရားရုံးချုပ်အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဂျော်ဂျီယာရဲ့တရားခွင်တရားရုံး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေပြင်ဆင် “စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်မှန်ဌာနခွဲ” အဘယ်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ရန်ဖြစ်ပါသည် “အခြို့သောရှုပ်ထွေးသောစီးပွားရေးမှုများမှတရားစီရင်ရေးအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု,” အဆိုပါဂျော်ဂျီယာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအနုညာတစီရင် Code ကိုအောက်မှာယူဆောင်လုပ်ရပ်များအပါအဝင်, O.C.G.A. § 9-9-20, အတွက်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော 2012. ဒါကသစ်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးခုံသမာဓိစင်တာဖွင့်လှစ်ဘို့အတွက်လမ်းခင်း.
ဒါဟာဂျော်ဂျီယာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးခုံသမာဓိစီမံခန့်ခွဲဖို့တရားသူကြီးမှတ်စာခန့်ထားမည်ရှိမရှိထင်ရှားစေခြင်းငှါဖြစ်နေဆဲ, ဘယ်မှာနယူးယောက်ရှိအမှုဖြစ်သကဲ့သို့ တရားမျှတရေးချားလ်စ် Ramos အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိကိုရည်မှတ်ကိစ္စရပ်များကိုင်တွယ်, သို့မဟုတ်ပါကခုံသမာဓိလူကြီးများက၎င်း၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်ပိုပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ်. တဦးတည်းဂျော်ဂျီယာနယူးယောက်ထက်ပိုအားလုံးပါဝင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်မယ်လို့, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာလိုအပ်ပါသည်ရှိရာအထူးသဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများလည်းမရွေးနိုင်နိုင်အောင်.
နောက်ထပ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိဗဟိုချက်မကြာသေးမီကဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ဥပဒေကျောင်းတွင်ဖန်တီးလိုက်ပါပြီ, တရားဝင်စက်တင်ဘာလအပေါ်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်သည့် 9, 2015.
ဂျော်ဂျီယာရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိကုဒ်ကိုအောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်, နှင့်တစ်ဦး အားလုံးနီးပါးကိုနိုင်ငံတကာခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြား၏စာရငျးကိုကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်.
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, ခုံသမဓိ, အနုညာတစီရင်၏တရားရုံး, ICDR အနုညာတစီရင်, ယူနိုက်တက်စတိတ်အနုညာတစီရင်